विल स्मिथलाई अस्कर जिताउने 'किङ रिचर्ड' को आँखा
- सुरज सुवेदी | बिहीबार, चैत १७, २०७८
मेरो लागि विल स्मिथको आँखाले यसपल्ट अस्कर जित्यो ।
उनको आँखा सिनेमा जगत्‌का लागि नौलो हैन । ती 'अलि' फिल्ममार्फत सन् २००२ मा अस्करको सबैभन्दा नजिक पुगेका पनि थिए । तर, त्यस बेला डेन्जल वासिङ्‌टनका आँखाले जित्ने पालो थियो ।
त्यसपछिका 'पर्स्वेट अफ ह्याप्पिनेस', 'कन्कुसन' जस्ता धेरै फिल्मले उनका आँखालाई अस्करनजिक पुर्‍याएनन् । सायद उनका आँखालाई अस्कर जित्न लायक कुनै विशेष चरित्र चाहिएको थियो । त्यो चरित्र जो उनीसँगै व्यक्तिगत रूपमा नजिकको होस् । उनको वर्णको इतिहास बुझ्ने । उनको आँखाको पीडासँग भिज्ने । उनका आँखाले देखेभोगेका धेरै कुरा सम्झिन ढिलो नगर्ने ।
जो 'अलि' फिल्ममा उनले खेलेका बक्सिङका सर्वकालीन महान् खेलाडी मोहम्मद अलिभन्दा फरक, अनि 'कन्कुसन' मा नेसनल फुटबल लिगविरुद्ध लड्ने डाक्टर जेनी मेरी भन्दा पागल होस् ।
त्यस्तो चरित्र जसको कथा उनलाई पनि धेरै हिसाबले आफ्नोजस्तो लागोस् ।
यसपालि त्यस्तै भयो । उनले विश्व चर्चित टेनिस स्टार सेरेना र भिनस विलियम्सका बाबु रिचर्ड विलियम्सको जीवनमा आधारित फिल्म 'किङ रिचर्ड' खेले । काला जातिको मान्छे भएर आफ्ना छोरीहरूलाई विश्वकै उत्कृष्ट टेनिस स्टार बनाउने क्रममा रिचर्डले भोगेका अनेकौँ सङ्घर्षहरू सँगेले । काला जातिको भएकै कारण जीवनभर आँखामा बोकेको आत्मसम्मानको भोकलाई थपक्कै आफ्नो आँखामा सारे ।
अस्कर साक्षी राखेर बोल्दै उनले सिनेमा क्षेत्रमा दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ, अफवाहसँग लड्नुपर्छ, अनि अपमानलाई केही नभए जसरी सहनुपर्छ भनिरहँदा काला जातिको कलाकार भएर हलिउडमा उभिइरहन गर्नुपरेको उनको सङ्घर्ष छल्किएको थियो । त्यो सङ्घर्ष गोरा जातिको पनि होला तर काला जातिका लागि काला भएकै कारण धेरै थियो । त्यो सङ्घर्षमा केही वर्ष पहिला अस्कर समारोह नै बहिष्कार गर्नुपर्दाको पीडा अल्झिएको थियो ।
त्यस्तै, अल्झाई 'किङ रिचर्ड' मा रिचर्ड विलियम्सले गरेका सङ्घर्षसँग धेरै नजिक थियो । उनले भोगेका विभेदसँग परिचित थियो । त्यसैले त अस्कर समातेर बोल्दै गर्दा विल स्मिथ घरी घरी रिचर्ड नै हुन् कि भइरहेथ्यो ।
'किङ रिचर्ड' एक बाबुको कथा हो । विशेषगरी दुई छोरी भिनस र सेरेनामा रहेको टेनिसको सम्भावनालाई लामो योजना बनाएर पूरा गर्न डटिरहने बाउ । आफू बसेको ठाउँले त्यत्रो सपना नदेख्नु भने पनि त्यसैलाई चुनौती दिएर सपना देखिरहेको बाउ । उनीहरूको छेउमा सधैँ खुसी देखिए पनि भित्र गहिरो घाउ बोकेर उभिएको बाउ । आत्मसम्मान पाउनका लागि जुनसुकै तहको सङ्घर्षबाट गुज्रिन तयार भएको बाउ ।
ती सबै तह भएका बाउको आँखालाई विल स्मिथले उत्कृष्ट तरिकाले अपनाएका छन् । उनका आँखामा रिचर्डले बाल्यकालदेखि भोगिआएको चरम विभेदको बोझ छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सडकमा दिनदहाडै मारिनबाट बचाउने होसियारी छ । आफूले कहिल्यै नपाएको आत्मसम्मान छोरीहरूले पाउन सङ्घर्ष गर्नुपरोस् भन्ने लगाव छ । उनीहरूका लागि हरेकपल सामुन्ने उभिने साहस अनि उनीहरूको अगाडि कुटाइ नै खानुपरे पनि त्यसलाई नियमित अभ्यासको उल्झन नबनाउने विश्वास पनि छ ।
अनि सँगै ती सबैसँग लड्दालड्दा थकित भएको बेलामा आफ्नो श्रीमतीसँग अडिएर लाचार हुने साहस पनि छ ।
रिचर्डको अभिनय गरेका विल स्थिमको आँखामा यी सबै भावहरू देखिन्छन् । जीवनका अनेक चरण अनि फिल्मका अनेक दृश्यमा भएका फरकफरक अनुभूतिहरूसँग उनका आँखा सजिलै मिसिन्छन् ।
यो कुरा फिल्म निर्देशक रिनाल्डो मार्कस ग्रिनले उनको आँखाको स्थितिबाट पनि भनेका छन् । रिचर्डका आँखा र क्यामेराको उचाइ फिल्मका फरकफरक तहमा फरकफरक छन् । फिल्म सुरु हुँदादेखि नै उनका आँखा झुकिरहेका छन् । टाउको थोरै निहुरिएको छ । उनी क्यामेरामा सिधा कुनै पनि बेला हेर्दैनन् । क्यामेरासँग भिनसले सफलता हात नपार्दासम्म पनि समानान्तर हुँदैनन् ।
फिल्मको एउटा दृश्यमा उनी छोरीहरूलाई टेनिस अभ्यास गराउन नजिकैको सार्वजनिक कोर्टमा लान्छन् । त्यहाँ उनकी एक छोरीलाई मन पराउने काला जातिका युवकसँग उनको भनाभन पर्छ । उनी तीबाट कुटिन्छन् । उनले कुटाई खाएको छोरीहरूले देख्छन् । त्यहाँबाट उनीहरू घर फर्किंदै गर्दा गाडी चलाइरहेको रिचर्डको आँखा पछाडि हेर्ने ऐनामा देखिन्छ । उनको आँखामा गहिरो पीडा देखिन्छ । आफूमाथि अन्याय भएको थाहा भएर पनि केही गर्न नसक्नुको पीडा ।
उनको आँखा फिल्ममा धेरैतिर कमजोर छन् तर स्वाभिमानी पनि छन् । छोरीको सपनाका लागि सधैँ आतुर छन् तर त्यो सपना कुनै सामान्य विपनामा फ्यास्स नहोस् भनेर धैर्य पनि गर्छन् । उनी छोरीले राम्रो गर्छिन् भन्ने विश्वास पनि गर्छन् तर उनले खेलेको खेल लाइभ हेर्न डराउँछन् । उनी छोरीहरूलाई सबैभन्दा माया पनि गर्छन् तर उनीहरूबाट टाढा पुग्न सक्ने जोखिममा पनि छन् । उनी श्रीमतीसँग बालकजसरी लेपसिन पनि सक्छन् तर आफ्नो हठले गर्दा श्रीमतीले 'छोरीहरू थिएनन् भने म तिमीसँग रहन्न थिएँ' भन्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्छन् ।
यो फिल्म रिचर्डको उतारचढावको कथा हो जसलाई विल स्मिथले आफ्ना आँखामार्फत बटुलेका छन् । फिल्मले रिचर्ड विलियम्सलाई स्तुति मात्र गरेको छैन । बरु उनको चरित्रलाई एउटा मानवीय चरित्रले गर्नसक्ने सबै कमजोरी भिराइदिएको छ । उनले योजना गरेका कुरा सफल भएको देखाए पनि त्यो सफलताले के के कुरा गुमाउने जोखिम थियो प्रस्ट्याइदिएको छ । संसारभरका करोडौँ काला जातिका युवतीहरूका लागि रोल मोडल बनेका भिनस र सेरेना विलियम्सको स्थानमा पुग्ने बाटोमा के–कस्ता अवरोधहरू थिए, बुझाइदिएको छ ।
विल स्मिथका आँखाले फिल्मका धेरै दृश्यहरूको गहिराइलाई प्रतिबिम्बित गरिदिएका छन् । रिचर्ड आत्मसम्मान कति चाहन्छन् भन्नेदेखि सधैँ खुसी भइरहेको देखिने उनका आँखामा लुकेका असीमित पीडा छल्काइदिएका छन् । राज्यले पनि धेरै पर बनाएको क्याम्टन भन्ने ठाउँमा बसेर सपना देख्नुको भारीलाई चिनाइदिएका छन् ।
फिल्मले रिचर्ड र उनको परिवारको कथा भन्दै काला जातिले भोगेर आएको उत्पीडनको इतिहास पनि बताउँछ । भिनस विलियम्स र सेरेना विलियम्सले बिताएको बाल्यकालसँग साक्षात्कार गराउँदै तीनलाई सहज बनाउन उनको बाबु र आमाको भूमिका देखाएर गहिरो राजनीतिक सन्देश पनि भनिसक्छ । उनीहरूको समयमा काला जातिको मान्छेलाई के हुनु सामान्य थियो भन्ने कुरा देखाइदिन्छ ।
पहिलोपल्ट कुटाइ खाएपछिको एउटा दृश्यपछि उनीहरू घर पुग्दा छोरीहरूले आमालाई 'बाबाले आज पनि कुटाइ खानुभयो' भनी सुनाउँछन् । त्यसले बाबुले खाइरहेको कुटाइको नियमितता बताउँछ । सँगै कुटाइ खानु त्यो समयमा पनि कति सहज थियो, बुझाइदिन्छ ।
एउटा दृश्यमा छोरीहरूलाई जुनियर टेनिस खेलाउन लगिरहेको बेलामा उनीहरूतिर अनौठो मानेर मानिसहरूले हेरेपछि रिचर्ड भन्छन्, 'उनीहरूलाई हामीजस्तो राम्रो मान्छे देख्ने बानी छैन ।' उनले हलुका तरिकाले भनेको भए पनि त्यो उनीहरूको अस्तित्वलाई समाजले नस्वीकार्ने बेलाको असामान्य हेराइ अर्थात् 'गेज' थियो । काला जातिका मानिसहरू त्यस्तो गेजबाट धेरै गुज्रिएका थिए ।
छोरीसँगको एउटा दृश्यमा भावुक हुँदै भिनसलाई रिचर्ड भन्छन्, 'म सानो हुँदा गोरा मान्छेलाई छुनु पनि अपराध थियो ।' त्यो उसले बोकिरहेको मेमोरी अर्थात् सम्झनाको अभिव्यक्ति थियो ।
अर्को दृश्यमा रिचर्डले फोन गरिरहेको कुरा सुनाउने व्यक्तिलाई एक जना कोच भन्छन्, 'यदि उनीहरू त्यति खतरा छन् भने मैले कसरी थाहा पाइनँ ?' युवक जवाफ दिन्छ, 'उनीहरू क्याम्पसनबाट हुन् ।' अर्थात् उनीहरू काला जातिका मानिसहरू बस्ने एरियाबाट हुन् ।
ती सबै कुरा कुनै न कुनै रूपमा समाजको संरचनाबाट बनेका हुन्, जुन अमेरिकामा त्यो बेलाको समयदेखि अहिलेसम्म पनि कायम छन् ।
अर्को एउटा दृश्यमा भिनसले प्रतियोगिता जितेको कुरा छापिएको समाचार उनीहरूले पढिरहेको बेला टीभीमा पुलिस क्रूरताको समाचार आइरहेको हुन्छ । एक जना युवकलाई केही पुलिसहरू निर्घात कुटिरहेका हुन्छन् । बाँकी पुलिस रमाइलो मानेर हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो कुराले केही वर्षपहिला काला जातिका भएकै कारण प्रहरी हिरासतमा मारिएका जर्ज फ्लोयडको घटनाको सम्झना आउँछ । अनि आजको दिनमा पनि अमेरिकामा हिरासतमा रहेकामध्ये काला जातिका मानिसहरू धेरै मारिने गरेको घटना दर्शाउँछ । कुनै निश्चित जातिको भएकै कारण भोग्नुपर्ने त्यस्ता घटनामा काला जातिका मात्र नभएर गोरो छाला नहुने लगभग सबै पर्ने गरेका छन् ।
यो फिल्मले ती सबै परिस्थितिहरू देखाएर त्यसका बाबजुद पनि छोरीहरूलाई विश्वचर्चित खेलाडी बनाउन रिचर्डले गरेको मिहिनेत पस्किन्छ । अर्थात् छोरीहरूको सफलतामा उनी कहाँकहाँ ढाल बनेर उभिनुपरेको थियो भन्ने दर्शाउँछ । त्यसलाई देखाउने एउटा दृश्य उत्कृष्ट छ । जसमा रिचर्ड दोस्रोपल्ट उनी टेनिस कोर्टमै कुटिन्छन् । उनलाई लडाएर जाने बेलामा ती युवकहरू अभ्यास गर्ने बलहरूको ठूलो टोकरी कोर्टमा लडाइदिन्छन् । ती बलहरू कुटाइ खाएर लडिरहेका उनीतिर गुड्किँदै जान्छन् ।
तर, फिल्मको नाम बाबुको नामबाट राखिए पनि यो बाबुको फिल्म मात्र भने हैन । आमाको फिल्म पनि हो । नर्स रहेकी रिचर्डकी श्रीमती छोरीहरूको तालिममा सहज होस् भनेर डबल सिफ्ट काम गर्छिन् । उनीहरू घर आउँदा खाना तयार गर्छिन् । रिचर्ड फिल्ममा छोरीहरूको अगाडि जति बलियो देखिए पनि ऊ हरेकपल्ट कमजोर हुँदा श्रीमतीको अँगालोमा नै हुन्छ । उनी उसलाई हरेक अवस्थामा सम्हाल्छिन् ।
उनी छोरीका लागि रिचर्डले गरेको योजनालाई अरू कसैले विश्वास नगर्दा पनि विश्वास गर्छिन् ।
उनी छोरीको निर्णय छोरीलाई सोधेर गरिनुपर्छ भन्छिन् । उसको योजनामा विश्वास भए पनि त्यसको सल्लाह सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्छिन् । रिचर्डले आफू सही छु भनेर बाटो बिराउन लाग्दा उनी उसलाई पुनः बाटोमा फर्काउँछिन् । रिचर्डले छोरीहरूका बारेमा एक्लै निर्णय लिन थालेपछि उनी भन्छिन् 'मेरो मौनतालाई स्वीकृति हो भन्ने नबुझ्नु ।' फिल्ममा उनको आँखा रिचर्डको जति त देखिँदैन तर ती आँखाले रिचर्डले बोकेको भन्दा कम सपना भने बोकेकी छैनन् ।
एउटा दृश्यमा युवकबाट कुटाइ खाएपछि तर उसलाई बदला लिन खोज्दै गर्दा ऊ मारिएको देखेपछि घर आइपुगेका रिचर्डको टाउकोमा लागेको घाउ श्रीमती हेर्दै हुन्छिन् । ऊ उनलाई सानो बच्चाले आमालाई अँगालो मारेजसरी मार्छन् । श्रीमती उनीतिर हात देखाउँदै कतिवटा औँला छ भनेर सोध्दै हँसाउँछिन् । रिचर्ड उनको जोकले हलुका हुन्छ र नुहाउन जान्छ । ऊ जाने बेलासम्म पनि हँसिलो रहेकी श्रीमतीका आँखा ऊ गइसकेपछि बिस्तारै अँध्यारा हुन्छन् । त्यसले परिवारमा उनले लिएको फरक बोझलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
उनले त्यो योजनामा कति धेरै काम गरेकी छन् भन्ने कुरा एउटा दृश्यमा देखिन्छ । छोरीलाई प्रतियोगिता खेल्न नदिएपछि उनी र रिचर्ड बीचमा झगडा पर्छ । भनाभन हुन्छ । उनी छोरीहरू थिएनन् भने उहिल्यै छोडिसक्थेँ पनि भन्न भ्याउँछिन् । तर, ऊ निस्किन लागेको बेला उसको हात समाउँछिन् र काँधमा अडिन पनि दिन्छिन् । रिचर्डको अनुमान गर्न नसकिने र विवादास्पद निर्णय र दैनिकीलाई सहज बनाउन उनी जहिल्यै पनि सँगै हुन्छिन् । छोरीहरूका लागि सँगै हुन्छिन् ।
रिचर्डको शरीर जुन किसिमको शक्तिशाली देखिन्छ, त्यति नै रूपमा समाजको व्यवस्थाले उनको शक्तिलाई क्षीण बनाइदिएको छ । पर्खिंदापर्खिंदा उनको पर्खाइलाई घरी धैर्य गर्नै नसकिने बनाइदिएको छ त घरी उनीहरू त्यहाँसम्म आइपुगेकोमा सहानुभूति दिनेहरूले झनै कमजोर पारिदिएको छ । र, त्यो कमजोरीलाई रिचर्डकी श्रीमती अनेक गरेर बहादुरीमा बदलिरहन्छिन् । उसको विश्वासलाई उनी सधैँ शक्ति दिइरहन्छिन् ।
श्रीमान्‌ले गरेको कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै एउटा दृश्यमा उनी भन्छिन्, 'यो परिवारमा सपना देख्ने तिमी मात्र हैनौ ।'
यही कुरा कति धेरै परिवारहरूले बुझ्न बाँकी होला ? केवल असल पाटो मात्र देखाएर अनेक पात्रहरूको देवत्वकरण गरिरहने कति धेरै फिल्ममेकरहरूले बुझ्न बाँकी होला ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १७, २०७८, ०६:१६:००